संविधान र सरकारले नछोएका बालबालिका (भिडियोसहित) - TV Annapurna
July 18, 2018 October 16, 2018 Annapurna TV
विमल खड्का, टिभी अन्नपूर्ण।
वर्षायाम सुरु भएपछि राजधानी तथा राजधानीभन्दा बाहिर जिल्लाका सडक बालबालिकाको बिचल्ली हुने गरेको छ । विभिन्न कारणले घर, परिवार छाडी सडकमा जीवन बिताइरहेका बालबालिकाको वर्षातको समयमादिनहरु सडकमै रुझेर भिजेरै बित्छ । दिन होस वा रात सडकमा नै बिताउने, त्यहींखाने, त्यही घुम्ने, त्यही सुत्ने बालबालिका सडकमै आश्रित छन् ।
यस्ता बालबालिका असहाय, अशक्त वा विभिन्न घटना वा समस्यामा परेर सडकमा खुल्ला आकाशमुनि जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । कति बालबालिकाका आफन्त नै नभर्इ यसरी रातदिन खुल्ला आकाशमै फिरिरहेका छन् । कति बालबालिकाको यो रहर होला कतिलाई बाध्यता? यस्ता सडक बालबालिका विश्वमा एक सय ५० मिलियनभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा सडकमा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या मौसम, वातावरण, परिस्थिति र अवस्था अनुसार घटबढ भइरहने हुँदायति नै छ भनी निश्चित छैन ।
तर नेपालमा सडक बालबालिकाको सङ्ख्या झन्डै ६ हजार पाँच सय बढिरहेको बताइन्छ । यसरी सडकमा आश्रित बालबालिका दुई हजारभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । सरकारले सडक बालबालिकाका लागि विभिन्न कार्ययोजना लिए पनि ती योजना कागजमै सीमित भएको जानकारहरू बताउँछन् । सडक बालबालिकामा पनि केही सडकमै बस्ने, सुत्ने छन् भने केही सडक बालबालिका सडकमा कमाइका लागि आउने र साँझ अभिभावकमा संरक्षक भएको ठाउँमा गई खाने, सुत्ने गरेको पनि पाइन्छ। राजधानी तथा अन्य ठाउँमा दैनिक जसो माग्न हात पसार्दै हिँडेका, हातमा गरिब असहाय हो भनी पर्चा बोकेका वा विभिन्न अभिनय गरी मागिखाने बाटो गरी हिँडेका सडक बालबालिका दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । यसरी सडकमा हिँड्ने बालबालिकाको भविष्य कस्तो होला भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन को राजी छ ?
सडकमा किन छन् बालबालिका ?
विभिन्न परिवेशबाट जन्मिएका बालबालिका सडकमा आउनुको पनि विशेष कारण छ । कति बुबा आमाको माया ममता नपाई आउने गर्दछन् । भने कति सडकमै हुर्किरहेका हुन्छन् । सानै उमेरमा बाबुआमाको माया ममतासहित विद्यालय जान बालबालिका यति बेला सडक प्रवेश गर्न बाध्यकारी जस्तै छन् । सानै उमेर देखि खान, पढ्न र लेख्न पाउनु पनि बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर अधिकारको नाममा अहिले बालबालिका सडकमै दिन बिताइरहेका छन् । सडकमा मागेर होस या काम गरेर खाने बालबालिका दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । कतिपय बाबु आमाको गालीबाट प्रभावित भई भागेर बिचल्ली भई सडकमै दिन रात कटाउन बाध्य भइरहेका छन्।
पछिल्लो समयमा गरिएको अध्ययन–अनुसन्धानले बालबालिका सडकमा जाने, त्यही बस्ने, खाने, घर, परिवार, समाज छाड्नाको मुख्यकारण पारिवारिक हिंसा, साथीसंगत, आर्थिक विपन्नता,सामाजिक, पारिवारिक विखण्डन, अशिक्षित, लगायतका कारणले बालबालिका सडकमा आउने गरेका हुन् । सडक बालबालिका अहिले राजधानी तथा अन्य ठुला सहरहरूमा उत्तिकै छन् । जहाँ उनीहरूको सडक नै सबैथोक हुने गरेको छ ।
बालबालिकाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
सडक बालबालिका दैनिक सडकमा बेबारिसे अवस्थामा भेटिन्छन् । अघिपछि धुलोमा खेलिरहेका बालबालिका अहिले वषा याममा ओतको अभावमा सडकमै रुझिरेका छन् । केही सडक बालबालिका बुबा आमाको माया ममताबाट वञ्चित भएर सडकमा निस्किएका हुन्छन् । उनीहरू दैनिक यस्तै अस्तव्यस्त काठमाडौँको फोहोर र अस्तव्यस्त ठाउँमा बित्ने गरेको छ । काठमाडौँको सुन्दरता, बाग्मतीखोलाको किनार तथा विभिन्न मठ मन्दिरमा यस्ता बालबालिका भेटिन्छन् । यसरी सडकमा रहेका बालबालिकाहरू सडकसम्म आउनुमा अशिक्षित, अन्धविश्वास मुख्यकारण हुन् । समय सापेक्ष वैचारिक व्यवहारिक परिवर्तन आउन नसक्नु, बालमनोविज्ञान बुझ्न नसक्नु, आर्थिक अभावले अभिभावक नै पीडित हुनु, अल्कोहल वा लागूपदार्थको दुव्र्यसनीमा अभिभावक पर्नु, परिवारले दायित्वबोध नगर्नु जस्ता कारणले बालबालिका घर छाडेर हिँड्न बाध्यहुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
कहिले आउँछन् सडक बालबालिका मूलधारमा ?
सरकारले सडक बालबालिका लागि विभिन्न कार्ययोजना तयार पारे पनिअहिलेसम्म ती योजनाहरू अझै कार्यान्वयन हुने चरणमा छैनन् । देशका विभिन्न सहर सडकमा रहेका बालबालिकाहरू नेपालको संविधान र सरकारी नीति विपरीत भए पनि कसैले वास्ता गरेका छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक उल्लेख छ । त्यस्तै (३) मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । ४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी व यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गताक भएका, द्धन्दपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । तर यी व्यवस्था संविधानका कागजमै सीमित छन् । यी मात्रै होइन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम, नीति र नियम पनि बनाएको छ । ती कार्यक्रम र योजना पनि कागज र प्रतिवद्दतामै सीमित छन् ।
देउवा सरकारद्वारा नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाउन मिल्दैन : सर्वोच्च